Fiakaran’ny vidin-jiro : efa voafaritra mialoha ny fifanarahana, nefa miovaova ny vidin-tsolika… | NewsMada
Fiakaran’ny vidin-jiro : efa voafaritra mialoha ny fifanarahana, nefa miovaova ny vidin-tsolika…
Par Taratra sur 29/07/2016
Betsaka ny resaka mandeha mikasika ny fiakaran’ny vidin-tsolika sy ny faktioran’ny Jirama. « Maro ankehitriny ny faritra hisian’ny fahatapahana matetika, na eto Antananarivo sy ny manodidina aza », hoy ny minisitry ny Angovo sy ny akoran’afo, Ramanantsoa Rodolphe, omaly. Ary any amin’ny faritra sasany, mihamafy io fahatapahana io. Eo ny olana noho ny fifanarahan’ny Jirama sy ny orinasa tsy miankina mpamatsy solika. « Efa voafaritra mialoha ny fifanarahana, nefa miovaova ny vidin-tsolika, ka ny olana eo amin’ny elanelam-bidy », hoy ny minisitra. Mitady vahaolana momba izany ny Jirama sy ny minisiteran’ny Vola, ary mbola misy ny fiaraha-midinika amin’ireo mpamatsy solika.
Momba ny fiakaran’ny vidin-jiro kosa, ny amin’ny “tarif 16”, nilaza ny minisitra fa ny ampahany faharoa (2ème tranche) ihany no niakatra. Nasiana fiakarana ny “tarif 23” ho an’ireo indostria, araka izay fandaniana vitany. Nataon’ny fanjakana ny famerana izay tokony ho vidin-jiro ary tsara marihina fa miova tanteraka ny sandan’ny famokarana herinaratra vokatry ny fivoaran’ny teknolojia isan-karazany sy ny famokarana angovo amin’ny alalan’ny tohon-drano.
Anaty lavaka tanteraka ny Jirama
“Tsy ho zakan’ny vahoaka ny fampiakarana amin’ny tena vidiny famokarana herinaratra. Mbola fitsinjovana ny vahoaka avokoa izao misy izao”, hoy ny minisitra Ramanantsoa Rodolphe. “Ilàna fanomanana ny zava-drehetra, ka ny volana aogositra izao no hanomboka hihodina ny milina rehetra”, hoy ihany ny minisitra. Anaty lavaka tanteraka ny Jirama ary tsy ho mora ny fanarenana azy. Tsy vitan’ny Jirama irery izany fa iarahana amin’ny fanjakana, mpanjifa sy ireo mpiara-miombon’antoka, toy ny Vondrona eoropeanina, Bad, sns
Nisy ny fifanarahana momba ny saran-dalana
Momba ny solika kosa, tokony hapetraka ny vidiny zakan’ny rehetra sy ho fanamaivanana ny fanampiana avy amin’ny fanjakana. Nikasa hampiakatra saran-dalana ny mpitatitra noho io fiakaran’ny vidin-tsolika io. Najanona anefa izany aloha noho ny fifampidinihana teo amin’ny minisiteran’ny Angovo sy akoran’afo ; ny minisiteran’ny Fitaterana ary ny koperativa, araka ny fanazavan’ny minisitra Ramanantsoa Rodolphe. Raha miakatra anefa ny saran-dalana, tsy noho ny vidin-tsolika ihany fa eo indrindra koa ny fahalafosan’ireo kojakoja fanolo.